Sa'aa: Himamsa itergaa kammituu kan sa'aa yeroo agarsiisu eenyummaa gatii yeroo murteessuuf kan gargaaru. Gatii sirriin: 0-23.
Daqiiqaa: Himamsa itergaa kammituu kan daqiiqaa yeroo agarsiisu eenyummaa gatii yeroo murteessuuf kan gargaaru.Walumaagalatti,gatii 0 fi 59 gidduu fayyadamuu dandeessa.Haata'u malee,gatii hanga kanaan ala ta'e fayyadamu dandeessa, yommuu gatiin lakkawwii daqiiqaa kan sa'aa jijjiaru.
Sekondii: Himamsa itergaa kammituu kan sekondii yeroo agarsiisu eenyummaa gatii yeroo murteessuuf kan gargaaru.Walumaagalatti,gatii 0 fi 59 gidduu fayyadamuu dandeessa.Haata'u malee,gatii hanga kanaan ala ta'e fayyadamu dandeessa, yommuu gatiin lakkofsa sekondii kan daqiiqaa jijjiaru.
12, -5, 45 ni gita 11, 55, 45
12, 61, 45 ni gita 13, 2, 45
12, 20, -2 ni gita 12, 19, 58
12, 20, 63 ni gita 12, 21, 4
Faankishinii gatii yeroo fayyadami gatii qeenxee kamiyyuu jijjiiruuf,kanaafuu addadummaa yeroo shallaguu dandeessa
Faankishinnin TimeSerial jedhu gosa gegedarama varType 7 waliin (Guyyaa) deebisa.Gatiin kun gara keessatiin sirrenya mirree gidduu 0 fi 0.9999999999 cimmisa. Akkuma fankishiniin guyyaa enyummaa fi gatii eenyumaatiin wal falleesse ,yommuu eenyumman gatii guyyaatti guyyaa murtaa'een walitti dhufu,gatii faankishinii gatii yeroo waliin shallaguu ni dandeessa garuu qorachuu hin dandeessu.
Faankishinii yeroo eenyummaa keessatti,yeroo dabalate ulaagalee akka diraanitti dabarsuu dandeessa.Fakkeenyaaf fankishinii eenyummaa yeroo kanneen (Sa'aa, Daqiiqaa, Sekoondii) akka himamsa numeerikaalaa garaagaraatti.
MsgBox dDate,64,"Yeroo akka lakkofsaatti"
MsgBox sDate,64,"Yeroo Dhangaa'e"